Tsy hita maso toy ny rivotra
« Ny rivotra mitsoka amin’izay tiany, ary renao ny feony, nefa tsy fantatrao izay ihaviany na izay alehany, dia tahaka izany izay rehetra ateraky ny Fanahy. » Jao. 3:8.
Re eny amin’ny rantsan-kazo ny ritsoky ny rivotra, mikasaosaoka eny amin’ny ravinkazo sy ny voninkazo; nefa tsy hita maso izy, ary tsy misy olona mahalala izay niaviany, na izay alehany. Toy izany koa ny asan’ny Fanahy masina eo amin’ny fo. Tsy azo hazavaina toy ny fandehan’ny rivotra izany. Mety tsy ho azon’ny olona holazaina ny fotoana marina na ny toerana niovany fo, na tsy azony atao ny hanoritra ny tsipiriany momba izany; nefa tsy milaza akory izany fa tsy niova fo izy. Amin’ny alalan’ny fiasana tsy hita maso tahaka ny rivotra no iasan’i Kristy tsy miato eo amin’ny fo. Tsikelikely eny, ary angamba tsy tsapan’ilay mandray izany akory, dia misy hevitra tafiditra ao am-po izay mitarika ny fanahy ho eo amin’i Kristy. Mety ho azo izany amin’ny fieritreretana momba Azy, amin’ny famakiana ny Soratra Masina, avy amin’ny fihainoana ny teny avy amin’ny mpitoriteny. Ary amin’ny tsy ampoizina, rehefa misy antso mivantana koa avy amin’ny Fanahy, dia milefitra amim-pifaliana amin’i Jesôsy ny fanahy. Lazain’ny maro fa fiovam-po tampoka izany; nefa vokatry ny fitarainana maharitra nataon’ny Fanahin’Andriamanitra, izay nitaky asa maharitra feno faharetana.
Tsy hita ny rivotra, nefa misy vokany hita maso sy tsapan’ny tanana. Toy izany koa, ny asan’ny Fanahy eo amin’ny fanahy dia hiseho eo amin’ny fihetsika rehetra ataon’izay mahatsapa ny heriny mahavonjy. Rehefa mambabo ny fo ny Fanahy Masina dia manova ny fiainana. Avela ny eritreritra feno fahotana, afoy ny asa ratsy; ny fitiavana, ny fanetren-tena, ny fiadanana no mandray ny toeran’ny fahatezerana, ny fitsiriritana sy ny adilahy. Mandray ny toeran’ny alahelo ny fifaliana, ka mitaratra ny fahazavan’ny lanitra ny endrika. Tsy misy mahita ny tanan’ilay manala ny enta-mavesatra, na mibanjina ny fahazavana midina avy amin’ny lapa any ambony. Tonga ny fitahiana rehefa milefitra amin’ny finoana eo amin’Andriamanitra ny fanahy. Amin’izay dia mamorona olom-baovao araka ny endrik’Andriamanitra ilay hery izay tsy azon’ny mason’olombelona jerena.
Tsy mety ho azon’ny saina voafetra atao ny mahazo ny asan’ny fanavotana. Mihoatra ny fahalalan’ny olombelona ny zava-miafina raketiny; nefa izay miala amin’ny fahafatesana ka tonga amin’ny fiainana dia manaiky fa zava-misy avy amin’Andriamanitra izany. Mety ho fantatsika eto ny fiantombohan’ny fanavotana amin’ny alalan’ny fanandramana ataon’ny tena. Mahatratra ny taona mifandimby mandrakizay ny vokatr’izany. - IFM, tt. 167,168.